बिज्ञान प्रविधी Archives - Page2of 12 - Tamang Online
तपाईं अहिले बिज्ञान प्रविधी सम्बन्धी खबरहरु हेर्दै हुहुन्छ |
नेपालले पहिलो पटक प्रक्षेपण गरेको भूउपग्रह नेपाली स्याट–१ ले असार २ गतेदेखि पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने भएको छ । जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयले नेपालका लागि पहिलो पटक गत वैशाख ४ गते उक्त भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेको थियो । डेढ महीनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्ष आइएसएसमा रहँदै आएको सो भूउपग्रहले असार २ देखि पृथ्वीको कक्षमा आई परिक्रमा गर्न लागेको हो । नास्टमा ग्राउण्ड स्टेशन निर्माणको काम जेठ २७ गतेसम्ममा सकिने र नेपाली समयानुसार सो दिन
यो समाचार Flash News, Slideshow, प्रमुख खबर, बिज्ञान प्रविधी संग सबंधीत छ |
काठमाडौं। फेसबुकले म्यासेन्जरमा डार्क मोड सेवा उपलब्ध गराएको छ।फेसबुकले गत अक्टोबरमा यो फिचर ल्याउने घोषणा गरेको थियो। यो फिचर सार्वजनिक नभए पनि यो फिचरलाई म्यानुअल्ली प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सुविधा प्रयोग गर्न च्याटका क्रममा कुनैपनी साथीलाई चन्द्रमाको इमोजी पठाएमा प्रयोगकर्ताले डार्क मोडको अनुभव लिन सक्नेछन। डार्क मोड सेवा प्रयोग गरेपछि आँखालाई सहज र रातीको समयमा उपयोगी हुनेछ।यो डार्क मोडको सुविधा नेपाल र भारतसहित केहि देशमा च्याटमा चन्द्रमाको इमोजी पठाएर यसको
⊗मौरीले डसेपछि त्यसको खील हाम्रो शरीरमा गाडिन्छ र हामीलाई अति पीडा हुन्छ । अर्कोतिर, हामीलाई डस्ने मौरी पनि बाँच्दैन । अर्थात्, डसेपछि मौरी पनि मर्छ । त्यसरी, कसैलाई डसेपछि मौरी किन मरेको होला ? के त्यस्को ज्यान नै त्यसको खीलमा हुन्छ ? हाम्रो मनमा यस्तो जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविकै हो । आउनुहोस् यहाँ मौरी र त्यसको डसाई तथा डसेपछि मौरी किन मर्छ ? भन्ने बारे सामान्य चर्चा गरौं । यस संसारमा
ऐजेन्सी । फेसबुकले मेसेज डिलीट गर्न सकिने नयाँ फिचर बनाएको छ । अब तपाइले पठाएको मेसेज पाउने मान्छेले नदेख्ने गरी हटाउन सकिने छ । यो भन्दा पहिला पठाउने व्यत्तिले मेसेज डिलिट गरे पनि पाउने व्यत्तिले देख्न मिल्थ्यो तर अब पाउने प्रापकले नदेख्ने गरी पनि मेसेज डिलिट गर्न मिल्नेछ । तर यो तर मेसेन्जरमा पठाइएका मेसेजहरु निश्चित समयमा डिलिट गरिसक्नु पर्नेछ । पठाएको १० मिनेट भित्रमा मात्रै डिलिट गर्न चाहेको मेसेज
अमेरिकी कम्पनी एप्पलले नयाँ आइप्याड सार्वजनिक गरेको छ । न्युयोर्कको ब्रुकलिनमा आयोजित समारोहमा एप्पलले अहिलेसम्मकै पातलो आइप्याड प्रो सार्वजनिक गरेको हो । आइप्याड प्रोको सन् २०१८ को यो मोडेल ११ इन्च र १२.९ इन्च गरी दुई स्क्रिन साइजमा उपलब्ध छ । स्क्रिनको हकमा एलसिडी प्रोमोशन लिक्विड रेटिना डिस्प्ले रहेको छ । यसमा पिक्सेल मास्किंग टेक्नोलोजी रहेको एप्पलले जनाएको छ । नयाँ आइप्याड प्रो ६४ जिबी, २५६ जिबी र १ टिबी
अमेरिकी कम्पनी एप्पलले आगामी मंगलबार नयाँ आइप्याड तथा म्याक कम्प्युटर सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ ।ब्रुकलिनमा आयोजना गरिने विशेष समारोहमा एप्पलले आफ्ना नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि एप्पलले दुईवटा निम्तो पठाएको छ । त्यसमध्ये एउटा मानिस, भवन तथा अन्य वस्तुका स्केचहरु सम्मिलित रंगीन निम्तो छ, जसले सम्भवतः एप्पल पेन्सिल तथा अन्य कलात्मक फिचर्सलाई संकेत गरेको छ । त्यस्तै अर्को श्यामश्वेत निम्तोमा पानीका थोपाको आकृति छ, जसको
काठमाडौं । मोबाइल र सामाजिक सन्जालको प्रयोगमा नेपालीले भारतीयलाई जितेका छन् । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा पछिल्लो सर्वेक्षणले भारतीय भन्दा नेपाली जनता प्रबिधिको प्रयोगमा अगाडि देखिएका छन् । ललितपुरमा सार्वजनिक गरिएका १८ देशका करिब ४० हजार सर्वसाधारणमा गरिएको सर्वेक्षणले नेपालको कुल जनसंख्याको दुई तिहाई जनता मोइबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ता रहेको देखाएको छ । आईडीआरसी, सीआरडीआईलगायतका संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ७२ प्रतिशत नेपालीसँग मोबाइल फोन रहेको पाइएको छ । जबकी डेक्सटप कम्प्युटर